राजेश पायलको विवाह योजना ⋆ JINDAGANI.COM
Home » राजेश पायलको विवाह योजना
मंसिर ११, २०७४	0	By कला अनुरागी
स्कूले उमेरमा केहीलाई मन पराइयो । केहीलाई चिठी पनि पठाइयो । तर ती पुगे कि पुगेनन्सम्म थाहा भएन । त्यसो त धेरै उत्ताउलो भएर प्रेम गर्ने वातावरण पनि थिएन । हाम्रो परिवारमा बुबाको अदब अर्कै थियो । त्यसैले त्यो इज्जत धान्न पनि हामीले उत्ताउलिने अवसर पाएनौं । बद्मासी भनेकै पौडी खेल्न जानेस्तरसम्मको हुन्थ्यो ।
काठमाडौं आएपछि धरानबाट एक जनाले पत्र लेख्नुहुन्थ्यो । तर मैले त्यसको उत्तर फर्काउन सकिनँ । टेलिफोनमा कुरा हुने सम्भावना थिएन । त्यसैले त्यत्तिकै भइगयो ।
कतिलाई मैले मन पराएँ । काठमाडौंमै पनि मैले मन पराएका केटी साथी छन् । कतिको विवाह भइसक्यो, कतिको बाँकी छ । तर मैले कहिल्यै पनि ‘आइ लभ यू’ भन्न सकिनँ । किन भन्न सकिनँ भन्नेचाहिँ मलाई नै थाहा हुँदैन । अरूले कसरी भन्न सक्छन् होलाजस्तो लाग्छ । मैले प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार होला भन्ने असाध्यै ठूलो डर लाग्छ । त्यस्तो भयो भने ‘म त केही होइन रहेछु’ भन्ने मनोविज्ञानलाई झेल्न सक्दिनँजस्तो लाग्छ ।
बरु, बिहे भइसकेपछिचाहिँ भनेको छु, तिमीलाई मन पराउँथे नि भनेर । त्यसमध्येकी एकजना त चर्चित व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ । त्यसरी भन्दा ‘किन नभनेको त ?’, भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ । अरु कुरा त भन्ने कुरै भएन । आफ्नो संसारमा सबै रमाइसकेका हुन्छन् ।
तर मैले सार्वजनिक रूपमै भनिरहेकै छु, गर्लफ्रेण्ड बनाउन सकेको छैन । भएको भए त भन्थें पनि हुँला, ‘ल दवाव पनि आइरहेको छ । यो महिना अनुकूल पनि हो । म पनि तयार छु । तिम्रो के विचार छ ?’ तर नभएकाले यो महिनाचाहिँ त्यत्तिकै हुने देखियो ।
त्यसो त विवाह गर्ने उमेर पहिलेको जस्तो छैन अहिले । मेरी आमाको विवाह आठ बर्षमै विवाह भएको थियो रे ! दिदीको २२ बर्षमा भयो । कतिले विवाह नै गरेका छैनन् । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा गरौं । विवाह गर्नु नै भएन । त्यसो भनेर म विवाह नै नगर्ने सोचको मान्छे होइन । गर्ने योजनामै छु ।
मलाई थाहा छ, विवाह ढिलो गरिरहनुको कुनै तुक छैन । समय नै नमिलेको हो, बहाना बनाइरहेको पटक्कै होइन । मलाई आफ्नो विवाह निकै भव्य ढंगले गर्न मन छ । पाँच दाजुभाइमा म काइँलो छोरो । घरमा विवाह नभएको पनि धेरै भइसक्यो । साइँला दाजुको पाँच बर्ष अगाडि नै भएका हो । त्यसैले परिवार पनि मेरो विवाह भव्य होस् भन्ने चाहन्छ । परिवारको दवावले मात्रै होइनm, प्राकृतिक आवश्यकता हिसाबले र वंशज विकासको लागि पनि विवाह आवश्यक छ । यो पनि मैले बुझेको छु । तर मितिमात्रै निश्चित भएको छैन । अर्को मंसिर नकटाऊँ भन्नेचाहिँ मनमा छ ।
कोही आकर्षित त होलान् । वाह ! राजेशपायलसँग विवाह गर्न पाए त राजकुमारीजस्तो गरी बस्छु भन्ने सोचेर । तर त्यो पनि त सम्भव कुरा होइन । मसँग पनि पीडा छ, रिसराग र तनाव उत्तिकै छ । जतिबेला भेट्दा पनि हाँसिरहनुपर्ने, सेल्फी खिच्नुपर्ने भएकाले रिसराग र तनाव नभएको देखिएकोमात्रै हो ।
विवाहको प्रस्ताव गर्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ । अमेरिकाका डल्लासलगायत केही राज्यबाट प्रस्ताव आइरहेको छ । नेपालमै पनि फोन गरेर विवाहको प्रस्ताव राख्ने धेरै हुनुहुन्छ । कतिसम्म भने ‘यौन सम्बन्ध राखौं, मलाई नस्वीकारे पनि तपाईंको बच्चा हुर्काउन तयार छु’ भन्ने पनि छन् । ‘यौनसम्बन्ध राख्नमात्रै तयार छु’ भन्ने पनि छन् । तर यस्ता प्रस्तावलाई मैले ‘सिरियस्ली’ लिएको छैन । त्यसरी व्यक्त गरिएका कुरा आकर्षणमात्रै हो भन्ने बुझेको छु । एउटा तहको लोकप्रियता प्राप्त भइसकेपछि यस्तो कुरा आउँछ होलाजस्तो लाग्छ । विवाहको प्रस्ताव सजिलै स्वीकारिन्छजस्तो पनि लाग्दैन । पहिलो कुरा त मन मिल्नुपर्यो । त्यसपछि परिवारलाई पनि मनाउनुपर्यो । उहाँहरूको पनि चित्त दुखाउने कुरा हुँदैन । विश्वासमय वातावरण हुनुपर्छ । त्यस्ता कुरा म स्पष्ट छु । स्पष्ट बोल्नेलाई पनि मानिसले त्यति मन नपराउने रहेछन्जस्तो लाग्छ ।
अरू सम्बन्धका प्रस्तावबारे त सोच्ने कुरै भएन । म राजेशपायल राई हुँ । मेरो आफ्नै स्टाटस छ । मसँग सम्बन्ध राख्न चाहँदैमा म कहाँ तयार हुन्छु र ? त्यसलाई त म ठट्टाको रूपमा मात्रै लिन्छु ।